Propagandim-pifidianana : Hipoka hatrany ny kianjan’Antsonjombe -
AccueilRaharaham-pirenenaPropagandim-pifidianana : Hipoka hatrany ny kianjan’Antsonjombe
21/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy voalohany ary tsy ho farany, ary azo antoka fa mbola ho betsaka ireo ho voafitaka sy mamita-tena amin’ity fanangonana olona amin’ny endriny maro ity. Marson Evariste, Itkly Herizo Razafimahaleo, Roland Ratsiraka, Jean Louis Robinson, sns. « Nahafeno an’Antsonjombe » daholo ireo olona voalaza anarana rehetra ireo, ary samy nihevitra ny tenany ho lany ho filoham-pirenena avokoa.
Inona no tiana ambara amin’ity tafatafa androany ity? Tsy izay mahafeno olona na “mahafeno an’Antsonjombe” velively no hiravaka ny fandresena amina fifidianana. Samy nahafeno io kianjan’Antsonjombe lasa “Coliséum” io daholo izay kandidà namory vahoaka teo hatramin’izay firy taona nisian’ny fifidianana teto izay. Ao ireo tena resy lahatra, ao ireo “curieux” hoy ny vazaha, ao ireo te hijery lanonana, ary ao ireo manenjika fizarana tee-shirt sy vola, sns.
Izany hoe, tsy mari-drefy azo antoka velively io fanangonana olona io, famitahan-tena mihitsy aza no azo ilazana azy, ary efa betsaka ireo nigoka fahadisoam-panantenana tamin’izany.
Voatery miresaka izao zavatra izao isika mba hisaintsainan’ireo mpanao politika, antoko politika ary ireo izay manam-pikasana hilatsaka ho kandidà amin’ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Tsy izay « mahafeno an’Antsonjombe » akory no ho lany, raha tsy izany efa filoham-pirenena nifandimby teto i Marson Evariste, Itkly Herizo Razafimahaleo, Roland Ratsiraka ary Jean Louis Robinson.
Misy mihevitra tokoa mantsy ankehitriny fa ny famenoana olona ny kianjan’Antsonjombe no porofo entina milaza fa matanjaka sy mamim-bahoaka ilay antoko. Mba « nahafeno an’Antsonjombe » koa ange ny pastora Mailhol e! Feno hipoka foana io kianjan’Antsonjombe io rehefa misy artista malaza manafana izany.
Haka ohatra iray isika, nandritra ny fifidianana ben’ny tanàna farany teo. Feno hipoka mihitsy ny “Coliseum” nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ny kandidà Lalatiana Rakotondrazafy avy amin’ny fikambanana Free. Inona no zava-nitranga rehefa nirava? Hipoka olona ny arabe mihazo an’Avaradrano, Sabotsy Namehana, Ambohitrarahaba, sns. Mazava ho azy fa tsy mpifidy ho an’Antananarivo renivohitra velively mihitsy ireo olona ireo kanefa fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana ben’ny tanànan’Antananarivo renivohitra no natao. Dia ireny niaraha-nahita ireny ny vokatry ny fanisam-bato ny harivan’ny fifidianana ben’ny tanànan’Antananarivo.
Mitovy amin’io resaka kianjan’Antsonjombe io ihany koa ny olom-boafidy, ary efa noporofoin’ny tantara izany. AREMA sy mpiara-dia tamin’ny amiraly Didier Ratsiraka avokoa ny ben’ny tanàna, solombavambahoaka, senatera ny taona 2001 nanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena, isan’izany ohatra ny solombavambahoaka Kaleta. Fa tao anatin’ny adim-pamantaranandro 24 ora monja dia efa nivadika nanohana an’i Marc Ravalomanana ny tenany. Tsy nahavita niaro ny fitondran’ny amiraly akory ny fananany ireo ben’ny tanàna, solombavambahoaka ary senatera maro ireo. Mbola niverina indray izany tranga izany taty amin’ny taona 2002. TIM sy sakaizan’ny fitondrana Marc Ravalomanana avokoa ny olom-boafidy teto, indrindra ny ben’ny tanàna, ny solombavambahoaka ary ny senatera. Fa tsy nahavita niaro ilay fitondrana izany rehetra izany, satria ny vahoaka no tompon’ny teny farany.
Ny vahoaka resahina akory tsy voatery ho ireny mandeha mamonjy famoriam-bahoaka ireny fotsiny ihany fa eo indrindra aloha ireo mpiasam-panjakana, ireo mpiasa any amin’ny sehatra tsy miankina, ireo manao asa tena, ireo misafidy ny mangina tsy maneho ny heviny raha tsy amin’ny andron’ny fifidianana, sns. Mandritra io andro fandatsaham-bato io izy vao maneho ny alahelony, ny hatezerany, ny hafaliany ary ny faniriany. Efa miroso amin’ny bileta tokana moa isika nanomboka tamin’iny fifidianana filoham-pirenena farany ny taona 2013 iny. Fa talohan’izany, betsaka mihitsy ireo kandidà marary fo mahita ny bileta-ny miraraka mameno ny tany, izany hoe, tsy tafiditra ao anaty vata.
Etsy andanin’izany rehetra izany, misy kandidà tsy mila mandany vola mamory vahoaka sy manakarama artista malaza eny amin’ny kianjan’Antsonjombe kanefa manana antoka fa tsy maintsy ho lany amin’izay fifidianana hatrehiny. Misy ary tena mbola misy eto amin’ity firenena ity izany karazan’olona izany na dia vitsy aza ny isany. Mafy orina ny fifamatorana eo aminy sy ny vahoakany, ka tsy azon’iza hidirana tahaka ireny tanàna misy fefy tsilo ireny. Tsy afaka ny hangala-bato ao amin’io faritra io mihitsy izay kandidà mpifaninana aminy, izay ilay antsoina hoe “mamim-bahoaka”. Io ilay tonga amin’ny fitenin-jatovo manao hoe: “ny tanàna misy tompony e!”.